USDCHF ooVimba-Funda ukurhweba
I-USDCHF iphinda ibuyele kwaye iphinde ibuyele, ibuyela kwi-Uptrend Movement yayo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-11 kaDisemba
I-USDCHF iphinda ibuyele kwinqanaba eliqinileyo lenyanga ukuze ibuyele kwintshukumo yayo ephezulu. Imarike iye yachaphazeleka kakhulu yimpembelelo ye-bearish ukususela ngasekupheleni kukaNovemba wonyaka ophelileyo. Kwakukho idiphu eyomeleleyo yokuqala evela kwi-0.93770 eyehlise ixabiso kwi-0.91570. I-USDCHF ifumana kwakhona kwinqanaba lemfuno, kodwa ukunyuka kwemarike okungaphezulu kuyinkimbinkimbi ngamabhere atyhala ixabiso emva naphambili. Ekugqibeleni, imakethi yehla yaya kutsho kwinqanaba eliphantsi lemfuno.
Amanqanaba obonelelo: 0.92740, 0.93350, 0.93770
Amanqanaba eMfuno: 0.90360, 0.91070, 0.91570
USDCHF Ixesha elide Trend: Bullish
I-Bearish interception inokufumaneka kuyo yonke indawo yentengiso ye-USDCHF, kodwa ngaphandle kwaloo nto, ixabiso ligcine ukunyuka okuthambileyo. Inqanaba eliphezulu lokubonelela ukuba imarike ifikelele kwizinga lexabiso le-0.93770. Nangona kunjalo, ngokunyuka kwamaxabiso amaxabiso, i-USDCHF kulindeleke ukuba ekugqibeleni iphule eli nqanaba lokumelana. Ngasekupheleni konyaka ka-2021, iibhere ziye zaqhekeka ngakumbi kwintengiso kangangokuba ixabiso liye lehla kumgca walo wokunyuka.
Kanye njengemizekelo emininzi kwimarike ye-USDCHF, emva kokuhla ngaphantsi komgca wayo we-uptrend, ixabiso libuyisela i-0.91070 usebenzisa i-bullish engulfment iphethini ye-candlestick ukunyuka kwinqanaba lexabiso elilandelayo. Ukusuka apho, kuye kwakho ukunyakaza okungaphezulu ukuya ngezantsi kwe-0.92740. I-Oscillator ye-Stochastic iye yakhwela kwintsimi echithwe ngokugqithisileyo kwaye oku kuphawu lokutsalwa kwe-pullback njengoko imarike ngokwayo ibonisa i-candlestick ye-bearish.
USDCHF Ixesha elifutshane Trend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ze-4, i-USDCHF inqatshelwe kwi-0.92740 kwaye ngoku ibuyisela kwakhona. Imigca yeStochastic Oscillator ngoku idipha ukusuka kwinqanaba eligqithisiweyo. Amandla e-bullish emarike kufuneka ancede ukuphindaphinda kwexabiso kwaye aphule umgca wokubonelela. Ixesha le-MA le-14 lingaphantsi kweeyure ze-4 zekhandlela zokuyibuyisela phezulu. I-0.93360 yinjongo xa ixabiso liphula ukuchasana kwangoku.
Iinkunzi ze-USDCHF zenza ipateni yokuBuyisa iBullish Engulfment Candlestick Reversal Pattern
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-4 kaJanuwari
Iinkunzi ze-USDCHF zibeka ipateni yokubuyela umva kwe-bullish engulfment njengoko zilungiselela ukushukuma ukuhla koxinzelelo. Imarike izama ukubamba ngaphezu kwexabiso lexabiso le-0.91570 ukususela ekubeni yawela kuloo nqanaba ngoNovemba 30th, 2021. Umzabalazo wawude kwaye i-USDCHF ekugqibeleni yanikezela uxinzelelo kwaye yehla kwinqanaba elilandelayo kwi-0.91070. Nangona kunjalo, kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo, iinkunzi ngoku zenza ipateni ye-bullish engulfment ukuze ibuyele ngaphezulu kwe-0.91570.
Amanqanaba okumelana: 0.92740, 0.93770
Amanqanaba enkxaso: 0.91570, 0.91070
Intshukumo yemarike kwiinyanga ezidlulileyo ze-7 ibe yi-topsy-turvy. Oku kungenxa yempembelelo etshintshanayo yeenkunzi zenkomo kunye neebhere kwimarike, edla ngokubangela utshintsho olubukhali kwicala lemarike. Iziganeko eziphawulekayo kwezi zifumaneka nge-8 kaJulayi, i-6 ka-Agasti, i-10, kunye ne-26 kaNovemba, yonke into kulo nyaka uphelileyo. Uninzi lwezi meko, ipateni ye-bullish okanye ye-bearish engulfment candlestick yasetyenziswa.
Ukuhla ukuya kwi-0.91070, i-USDCHF ngoku isebenzisa iqhinga eliqhelekileyo lokunyusa imarike. Iinkunzi zenza ipateni ye-bulls engulfment ye-candlestick apho i-candlestick yayizolo inyuke isuka kumda ongezantsi we-Bollinger Band, ngoku inyuse ixabiso libuyele ngaphezulu kwe-0.91570. I-Oscillator ye-Stochastic ibonisa ukuba kukho ukunyakaza okuphezulu okuzayo njengoko imigca yayo iye yawela phezulu ukusuka kwindawo ye-bearish.
Iikhandlela zeeyure ze-4 ziye zaqhawula ibhendi ephantsi ye-Bollinger Band indicator kwaye inyuke ngaphezu komgca wayo ophakathi ukuze ifike kwinqanaba eliphezulu. Imakethi ngoku imile ngezantsi kwebhendi ephezulu njengoko ifuna indlela yokuqhubela phambili ukuya phezulu. I-Stochastic Oscillator ibonisa ixabiso kumda ogqithisiweyo kwaye sinokubona i-pullback ngaphambi kokuba i-USDCHF iqhube phambili ukuya kwi-0.92190.
I-USDCHF imihlaba kwindawo ye-Bullish Confluence Zone
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-28 kaDisemba
I-USDCHF ifika kwindawo yokuhlangana kwe-bullish. Emva kokuba amava exabiso ekhatywayo kwi-0.93770, i-slumps ngokuthe ngqo kwi-0.91570, iphula amanqanaba amaninzi abalulekileyo kwinkqubo. Emva koko, imarike yenyuka kancinci kwaye yaqala ukuguquguquka malunga nenqanaba lexabiso le-0.92190. Oku kwaqhubeka iiveki ezimbini ngaphambi kokuba iibhere ziqale ukoyisa imarike. Isiphumo kukuba i-USDCHF emva koko ihlala kwindawo ye-bullish confluence.
Amanqanaba okumelana: 0.93350, 0.92190
Amanqanaba enkxaso: 0.91070, 0.91570
I-USDCHF ibonwa kwinqwelomoya jikelele inyusa i-trendline. Oku kuqale ekuqaleni konyaka njengoko imarike izama ukubuyisela kwidiphu enzulu eye yaphosa imarike kwinqanaba lenkxaso ye-0.87730. Ukusukela ngoko, i-USDCHF ibisenza ukwehla okuphezulu ngokulandelelanayo. Okufanayo akunakutshiwo kwiimarike eziphakamileyo, ezihluka kakhulu ngenxa yokubethwa ngamaxesha amaninzi yimikhosi ye-bearish.
Ngokubanzi, i-USDCHF ihleli kwi-uptrend kwaye oku kumiselwe ukuba kuqhubeke njengoko imarike ihlala kwindawo ye-bullish confluence zone, equka umgca we-uptrend kunye ne-0.91570 yenkxaso yezinga. Ixesha le-MA le-50 (i-Average Moving) liyenyuka ngokuthe ngcembe, libonisa ubume bemarike. I-Stochastic Oscillator ivelise umnqamlezo wegolide ukusuka kwindawo ethengiswa kakhulu ukubonisa ukunyuka okuzayo kwimarike.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, njengoko ixabiso lihlala kwindawo ye-bullish convergence zone, ivelisa i-candlestick candlestick emhlophe-emhlophe, eyipatheni yokubuyisela umva. I-Stochastic Oscillator, njengakwitshathi yemihla ngemihla, ivelise umnqamlezo wegolide ukuya phezulu ukusuka kwindawo ethengiswa kakhulu. Oku kubonisa intshukumo eyomeleleyo ezayo. Nangona kunjalo, imarike kufuneka iqale igubungele ukuchasana ukusuka kwixesha le-MA le-50 kunye nenqanaba lexabiso le-0.92190.
I-USDCHF Bulls Misa kwi-0.9275 yakutshanje ephezulu njenge-Swissy Weakens
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-7 kaDisemba
I-USDCHF pair igcina i-intraday lows kwi-0.9231 naphezu kokumisa i-0.9275 intraday ephezulu. Ngaphandle kwe-USD, ezuzwayo ngokuchasene ne-CHF, imeko yentengiso yomngcipheko ibuhlungu ihaven ekhuselekile iimali. Ngokubanzi, isibini sinokungqina ukutsalwa kwexesha elifutshane njengoko abathengisi bacela umngeni kubathengi kwixesha elisondeleyo.
Ekuhambeni kwexesha, i-pullback esuka kwi-0.9275 yayinokwenzeka ukuba ihambe nje yokulungiswa, njengoko kubonakaliswe yi-rebound ye-0.9088 ukuya kwi-0.9373 kwi-0.9231. Oko kukuthi, ukuhla okukhulu ukusuka kwi-0.9472 kusenokuqhubeka. Esi sibini ngoku sithengisa ngaphantsi kwe-13-day rangeing average average, ebonisa i-medium-term consolidating trend.
Abathengisi be-Bullish banokujolisa kwinqanaba le-barrier ye-0.9300 ngexesha leseshoni yokurhweba elandelayo. Ngelixa isantya sisenamandla, i-pullback kwi-0.9177 ye-lift-off zone inokwenzeka, kodwa kuphela kwiindibano ezincinci. Ukutshatyalaliswa kwamva nje kwinqanaba le-0.9250 libonisa ukuba abathengi baye baphinda balawula imarike, kwaye ixabiso linokuthi lingene kwi-0.9300 nangaphezulu.
I-USDCHF idibanisa kakuhle ngaphezu kwexesha eliphantsi le-0.9150, kunye ne-intraday trend neutral. Ixabiso linokuthi lihambe ngaphakathi kwinqanaba elide nje ukuba i-0.9275 ixhathise. Ukuphulwa kwe-0.9200 kwi-negative iya kuqalisa kwakhona isilayidi ukusuka kwi-0.9375, ekhokelela ekuhlolweni kwakhona kwe-0.9157 ephantsi.
Ukuphulwa kwe-0.9275, ngakolunye uhlangothi, kuya kubonisa ixesha elifutshane eliphantsi. Ngokulindela i-rally enamandla, i-intraday bias iya kulungelelaniswa ibuyele phezulu. Inqanaba lokuchasana le-0.9275 lingasondela ngokulandelayo ukuba inqanaba le-0.9200 lihlala ligqithiswa. Nangona kunjalo, ngaphambi kokwenza ukuqhubela phambili okubonakalayo, iinzuzo zexesha elizayo zekowuti ziya kuthintelwa yimiqobo yendlela yasekuhlaleni.
I-USDCHF iBuyisela kwakhona kwi-0.9150 phakathi kwe-Upbeat ye-Swiss yokuThengisa iiNdawo zokuThengisa kunye neMifanekiso yokuNyuka kwamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-2 kaNovemba
Idola yaseMelika inyuke kakhulu ngokuchasene ne-Swiss franc ngoLwesibini, kunye ne-Swiss franc yehle nge-0.6 yeepesenti ngokuchasene nedola yonke imini. Ukufudukela phezulu kukubuyisela umva okubalulekileyo kwipatheni yamva nje yokuhla okuqhubelekayo. Ubuthathaka be-CHF ngoLwesibini buphikisana namandla Uqoqosho lwaseSwitzerland idatha ekhutshwe ngexesha leseshoni.
Amanqanaba enkxaso: 0.9080, 0.9050, 0.9000
Kwixesha lemihla ngemihla, ukubuyiswa kwe-bullish ukusuka kwinqanaba eliphantsi kwi-0.9088 kuqinisekisile ukubuyiswa kwakhona ngokutyhala phezulu kwi-0.9150 emva komhla wangaphambili ukuphosa kwi-0.9088. Ukulandela oko, ukuthengwa kwezobugcisa kuqikelelwa njengoko ixabiso likhuphuka ngaphaya kwamanqaku anamandla e-0.9150.
I-Dips kufuneka igcinwe kwinqanaba le-0.9101, elifumaneka kufuphi nomqobo wokuxhasa othe tye. Ukuhla kuphela okungaphantsi kwe-0.9101 kuya kubangela ukuba kubuyiselwe umva ophantsi we-0.9088. Nangona kunjalo, ikhefu elinamandla le-0.9150 yenkxaso eguqulelwe kwinqanaba lokumelana kuya kubonisa ukuguqulwa kwendlela kunye nokutshintshela ingqalelo kwinqanaba elibalulekileyo lokumelana ne-0.9200.
I-USDCHF yandisa umzekelo wayo wokudibanisa ukusuka kwi-0.9088 ephantsi, kwaye i-intraday bias ihlala ingathathi hlangothi. Ukuphulwa kwezinga eliphantsi le-0.9088 kuya kuphinda kuqalise i-slump enkulu kwi-downside. I-Intraday bias kwibini idibanisa ukusuka kwiindawo eziphantsi kweli nqanaba.
Ikhefu lenqanaba le-0.9101 elincinci lenkxaso kwi-downside iya kwenza i-intraday bias bearish kwaye izise ukudibanisa ekuqaleni. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso liphula umda osezantsi kwaye lihlala ngaphantsi kwe-0.9080, imeko ye-bullish inokuthi ingasebenzi. Kulo mcimbi, isibini sinokuqhubeka sityibilika ukuya kumanqanaba e-0.9050.